ကလိုစေးထူး: အောင်ကြည် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
Posted by ကလိုစေးထူး at 11:53 PM
ဟုတ်တယ်။ လဖက်ရည်ဆိုင်က လဖက်ရည်ကောင်းဖို့က အဓိကပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လဖက်ရည်ဆိုင် တဆိုင် အောင်မြင်ဖို့ကျတော့ အခင်းအကျင်း နေရာထိုင်ခင်း၊ ဆိုင်ရှင် (သို့) စားပွဲထိုးတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်မှု၊ လဖက်ရည်ကောင်းကောင်းအပါအ၀င် မုန့်မျိုးကလဲ စုံမှ။ လဖက်ရည်ချည်း သက်သက် ငုတ်တုတ် သောက်တာထက် မုန့်ကလေးနဲ့ သောက်တတ်တဲ့သူတွေလဲ ရှိသေးတယ် မို့လား။ စားသုံးသူတွေ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမျိုး ပေးနိုင်ရင်တော့ အောင်မြင်တဲ့ လဖက်ရည်ဆိုင် ဖြစ်ပြီပေါ့။
ဒါကိုဖတ်ပြီး ဘလော့လောကနဲ့ ယှဉ်တွေးကြည့်ပါတယ်။ (စာရေးဆရာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလဲ ဒါပဲလို့ ထင်ပါတယ်။)
ဘလော့တခု ဖန်တီးတဲ့အခါလည်း စာအရေးအသားကောင်းဖို့၊ (သို့မဟုတ်) ရေးတဲ့စာ/ တင်တဲ့ပို့စ် ဆွဲဆောင်မှုရှိဖို့က အဓိကပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘလော့နောက်ခံ အပြင်အဆင်၊ ဘလော့ရှင်ရဲ့ ဆက်ဆံရေး၊ သုတ-ရသ အစုံအလင် တင်ဆက်မှုရှိပြီး စာဖတ်သူ/ လာရောက်လည်ပတ်သူများ စိတ်ကျေနပ်မှု တစုံတရာရှိရင် အောင်မြင်တဲ့ ဘလော့တခု ဖြစ်ပြီပေါ့။
ဆရာ့ဘလော့က အောင်မြင်ပါတယ်။ လဖက်ရည်သောက်သူ (အဲလေ) စာလာဖတ်သူ အများသားပဲ။
Nov 13, 2008, 12:13:00 AM
မြူခိုးကဝေ့ဝေ့၊ နှင်းရောင်ဖြိုးဖြောက် မရှိတတ် ရှိတတ် နံနက်ခင်းမှာ ဘလော့ဖတ်သူ၊ ဘလော့ရေးသူ၊ သတင်းစနည်းနာသူ၊ ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ် လာရောက်လည်ပတ်သူ တွေနှင့်အတူ ဘလော့လောက တ၀ိုက်သည်လည်း လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်လို့နေချေပြီ။
"လာလည်သွားတယ်နော်/ အားပေးပါတယ်/ အမြဲလာဖတ်ပါတယ်/ မတွေ့တာကြာပြီ ဘာတွေလုပ်နေလဲ/ နေကောင်းရဲ့လား အဆင်ပြေရဲ့လား"
ဟူသော အသံများ၊ တချို့တချို့သော ကြော်ငြာလင့်ခ့်များ စီဘောက်တကာတွင် စီစီထနေပြီး ရောင်စုံမျိုးစုံလင်သော ဘလော့ရပ်ဝန်း၏ ဟိုမှာဘက် အပြာရောင်ခပ်မွဲမွဲ ဘလော့တခုမှာတော့ မှုံတေတေ မျက်နှာထားနှင့် လူတယောက်က သူ့ဘလော့တွင် ပို့စ်အသစ် တင်ရန် အသဲအသန် စာရေးလို့ ကောင်းနေတုန်းပင်...။ ထိုဘလော့ကတော့ ... ...၊
ဆက်မရေးတော့ဘူး။ ပျင်းလို့။ ရေးရင် တပုဒ်လုံး ရေးလို့ရတယ်။ ဟဲဟဲ။
နောက်တာနော်။ ခင်လို့။ စိတ်မဆိုးဘူးမှတ်လား။
Nov 13, 2008, 12:34:00 AM
ဖိုးအောင်ကြည်ရေ…. မင်းလက်ဘက်ရည်က ပြင်းလိုက်တာကွာ။ ဟိုလိုလေးဖျော်လိုက်ပါ့လား။
အောင်ကြည်ရေ….. မင်းလက်ဘက်ရည်က အချိုနည်းတယ်ကွာ။ လူတွေက သကြားများမှ ကြိုက်တာကွ။
ဟဲ့….မောင်အောင်ကြည်ရေ….. ကိုယ့်လက်ဘက်ရည်ဆိုင် လူစည်ဘို့ဆိုတာ နင်ကလည်း သူများဆိုင်တွေမှာ သွားပြီး တပြန်တလှည့်အားပေးဦးမှပေါ့ဟဲ့။ ဒီအတိုင်း ကိုယ့်ဆိုင်မှာဘဲ ဖင်ကျောက်ချ ထိုင်နေလို့ရမလား။ မိတ္တဗလ လိုတယ်ဟဲ့။
အောင်ကြည်ကြီး... မိတ်များဘို့ဆိုတာ နှုတ်ချိုပြီး လက်တိုဘို့ လိုတယ်သိလား။ လူတွေက ချိုချိုသာသာပြောရင် အလေးခိုးတာတောင် ခွင့်လွှတ်တတ်ကြတယ်။
ကိုကြီးအောင်ကြည်….. လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ပိုစတာလေးတွေ ကပ်ပါဦးဗျ။ ဖိုဘီကိတ်တို့။ ကိတ်ဝမ်းစက်လက် လို့ ရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေ။ ဒါမှ လူငယ်ပိုင်းနဲ့ ကိုက်မှာပေါ့။
ကိုအောင်ကြည်ကြီး…. ခင်လို့လာတာနော်။ မီးတို့ဆိုင်လဲလာအားပေးဦး။
စသဖြင့် အမျိုးမျိုးသော အကြံပြုချက်များကို အလုံးစုံလိုက်လုပ်သဖြင့် တနှစ်ခန့်ကြာသောအခါ
မူလ အောင်ကြည်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်အဖြစ်မှ အီကြောင်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်အဖြစ်သို့လည်းကောင်း၊ နောက်လအနည်းငယ်ထပ်ကြာသောအခါ အူကြောင်လက်ဘက်ဆိုင်အဖြစ်သို့လည်းကောင်း၊ ကြာသောအခါ အူကြောင်ကျားလက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဘ၀သို့ ဆိုက်ရောက်သွားလေသတည်း….သွပ်သွပ်သွပ်။း-)
Nov 13, 2008, 1:45:00 AM
လက်ဖက်ရည် ချိုခါးသောက်ချင်ရင်တော့ လာခဲ့ဗျို့
Nov 13, 2008, 3:31:00 AM
ကိုကြီးစေးထူးရေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးကို ဖတ်သွားပါတယ် ...ဒီထဲက ဇာတ်ကောင် ကိုအောင်ကြည်လို မှန်ကန်တဲ့ အယူအဆလေးတွေ လူတိုင်းမှာ ရှိသင့်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ တခုတည်းနဲ့တော့ ဘ၀ဟာ မပြည့်စုံပါဘူး အခြား လိုအပ်ချက်လေးများလဲ ရှိတတ်နေပါတယ်နော့် တနေ့ ကျနော်တို့တွေ ကိုအောင်ကြည်ဆိုင်က လက်ဖက်ရည်လေး တူတူသွားသောင်္ကကြမယ်လေ အားလုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပေါ့
Nov 13, 2008, 3:37:00 AM
လ္ဘက်ရည်ကိုပဲ အရသာခံမြတ်နိုးတတ်တဲ့သူမို့ ကိုအောင်ကြည် ရဲ့ဆိုင်မှာဆက်ထိုင်ဖြစ်နေဦးမှာပါ ။ နေရာ ၊ အပြင်အဆင် ၊ သီချင်းတွေက လ္ဘက်ရည်ပေါ်မှာဆင့်ပွားပြီး ယဉ်ကျေးမှု့ထပ်မြှင့် ကြတာလို့ ထင်ပါတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လ္ဘက်ရည်လာသောက်ဖြစ်နေမှာပါဗျာ ။
အဖျော်ဆရာလက်ထွက်တိုင်းသောက်ဖို့ မလိုပါဘူး ။
လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ပဲဗျာ ။ ဆိုင်ရှင်နဲ့ ရင်းနှီးမှ လာသောက်တိုင်းနှုတ်ဆက်သွားမှ အားပေးသူ တစ်ယောက် ဖြစ်မှာမှမဟုတ်ပဲ ။ အရေးကြီးတာက လ္ဘက်ရည်ကြိုက်တတ်ဖို့ နဲ့ သောက်တတ်ဖို့ပါပဲဗျာ ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရသာရှိရှိ လ္ဘက်ရည်တစ်ကျိုက် နဲ့တင်ကျေနပ်ပါတယ် ။ ဆိုင်မပိတ်သေးသ၍ လာသောက်နေပါဦးမယ် ။ ဆက်ဖျော်ပါ အစ်ကို (ဟုတ်ပါဘူး) ဆက်ရေးပါ အစ်ကို.... အဟေးဟေး အဆင်ပြေပါစေဗျာ
Nov 13, 2008, 6:58:00 AM
အမကတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင် လက်ဖက်ရည်စစ်စစ်၊ ကောင်းကောင်းကိုပဲ မျှော်လင့်လို့ လာထိုင်တာပါပဲ။
သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်နဲ့ သဘာဝဆန်ဆန် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဆိုရင် ပိုထိုင်ပျော်တာပေါ့။
လက်ဖက်ရည်ပဲ ကောင်းပြီး ယင်တလောင်းလောင်းနဲ့ ညစ်ပတ်နေရင်လဲ ဘယ်သူထိုင်ပါ့မလဲ။
စားသုံးသူအကြိုက် ကိုယ်ကြိုက်ရာ ရွေးချယ်ခွင့်ရနေတာကိုက ကျေနပ်စရာပဲ မဟုတ်လား။
ကိုယ့်ဆိုင်လေး သဘောကျစရာဆိုရင် စိတ်တူသူတွေ လာရင်ကိုပဲ ကြည်နူးစရာပါလေ..။
အမသာ ကိုအောင်ကြည်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းလေး ဖျော်နေ ပြုစုနေရရင်ကို တော်ပါပြီ။ သူတို့ဖာသာ ရွေးပါစေ။
အိမ်က အဖေနဲ့ အမေက လဘက်ရည်ကျိုးတွေ… ခရီးသွားရင် ဆိုင်လေး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဆိုရပ်လိုက်ပြီး လဘက်ရည်က အတော်ညံ့နေရင် အဖေက တဗျစ်တောက်တောက် ပြောလို့ မဆုံးဘူး... ဆိုင်ပြစားနေတာတဲ့…
ကျွန်မက လဘက်ရည်မကြိုက်တတ်ဘူး… ဒါပေမယ့် ကိုအောင်ကြည့်ဆိုင်တော့ ထိုင်ဖူးချင်တယ်… သူ့ ဦးစားပေးစံကို ကြိုက်လို့ …
Nov 13, 2008, 11:01:00 PM
ကိုအောင်ကြည်ကို ပြောလိုက်ပါ။ "ပေါ့ဆိမ့်" ကောင်းကောင်း အမြဲသောက်ချင်ပါတယ်လို့။
Nov 14, 2008, 12:14:00 AM
always come to ur blog daily and truly feel whatever u witten. but never write comment.
bcoz I like only nice tea.......
pls keep writing ur bolg........:)
Nov 14, 2008, 2:06:00 AM
ဆိုင်ရှင်ကိုအောင်ကြည်က လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းဖျော်ပေးနေရရင် ကျေနပ်သလို ကျနော်ကလဲ လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းသောက်နေရရင်ပဲ ကျေနပ်နေတတ်သူမို့ တခါတရံတော့ နှုတ်ခွန်းဆက်ဖို့ ပျက်ကွက်မိပါကြောင်း :)
Nov 14, 2008, 2:30:00 AM
လက်ဖက်ရည် ကောင်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဖျော်လဲမသိခင်အချိန်ကပေါ့..။
နောက်တော့.. လက်ဖက်ရည်ကို ဘယ်လိုဖျော်တာလဲ ဘာကြောင့်ဖျော်တာလဲ ဆိုတာ သိသွား တဲ့သူအဖို့ကတော့ ဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောရမှာ ဝန်လေးလာတယ်ဗျာ
မသိတဲ့သူတွေကတော့ အဖျော်ဆရာရဲ့ လက်ရာကို နှစ်သက်နေကြဦးမှာပဲ
Nov 14, 2008, 5:14:00 AM
ဟီဟိ ကျမတို့လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေးကိုများ စောင်းပြောနေတာလားမသိဘူး။ လက်ဘက်ရည်ကလွဲရင် ကျန်တာ သိပ်မကောင်းလို့ အရင်းပြုတ်ခဲ့ဖူးတယ်ဗျို့..
Nov 14, 2008, 6:24:00 AM
မနက်တိုင်း လက်ဖက်ရည် ပါဆယ် ၀ယ်သောက်တယ်။ ဆိုင်တော့ သိပ်မထိုင်ဖြစ်ဘူး ကိုအောင်ကြည်ရေ။
Nov 15, 2008, 8:06:00 AM
ပို့စ် ရော အပေ်းက ကောမန့်တွေရော အကုန်ဖတ်ကောင်းတယ်....
Nov 16, 2008, 12:07:00 AM
post ရော comments တွေရော
ကိုအောင်ကြည် ရေ...အဲ ကိုစေးထူးရေ..
ကိုအောင်ကြည့် စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ကြိုက်တယ်ဗျာ။ အနှစ်သာရရှိမှု ဆိုတာ လောကမှာ အရေးကြီးဆုံးဗျ။
Nov 17, 2008, 10:59:00 PM
အဲဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို သိခဲ့ရင်အခုလို ကြိုက်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ပါဘူး
Nov 18, 2008, 12:54:00 AM